आज : २०७७ माघ ११ आइतबार | Today: 24 Sunday, 2021
२०७६ भदौ २९ आइतबार १६:३७:०० प्रकाशित
अक्सफोर्डशरस्थित ब्लेनम प्यालेसबाट १८ क्यारेट सुनबाट बनेको कलात्मक ट्‌वाइलेट चोरी भएको छ। चोरहरूको एउटा समूह स्थानीय समयानुसार शनिबार बिहान ४:५० मा सो दरबारमा छिरेको टेम्ज भ्याली प्रहरीले जनाएको छ।
आगतन्तुकहरूलाई प्रयोग गर्न दिइएको उक्त ट्‌वाइलेटको नाम 'अमेरिका' राखिएको थियो। चोरीको घटनापछि ६६ वर्षीय एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ।
ट्‌वाइलेट चोरी भएपछि सो भवनमा क्षति पुगेको र पानी बगेको प्रहरीले जनाएको छ।
के हो यसको विशेषता?
अठारौँ शताब्दीमा निर्मित उक्त दरबार विश्व सम्पदा सूचीमा छ। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री सर विन्स्टन चर्चिलको जन्म यहीँ भएको थियो। सुनको ट्‌वाइलेट बिहीवारदेखि सुरु भएको इटालीका कलाकार मौरिचिओ कट्टेलानको एउटा कला प्रदर्शनीको अंश थियो।
बहुमूल्य कलाकृति चोरी भएपछि अनुसन्धानका लागि उक्त भवन बन्द गरिएको थियो। चर्चिल परिवारका सदस्य एड्वर्ड स्पेन्सर चर्चिलले गत महिना आफू उक्त कलाकृतिको सुरक्षाबारे ढुक्क भएको बताएका थिए। 'यो त्यति सजिलै निकाल्न सकिने वस्तु हैन,' उनले भनेका थिए।
प्रदर्शनी हेर्न आएका आगन्तुकलाई शौचकर्म गर्न उक्त ट्‌वाइलेट प्रयोग गर्ने अनुमति दिने गरिएको थियो। तर अरूले धेरै बेर कुर्नु नपरोस् भनेर तीन मिनेटमा काम सकिसक्नुपर्ने नियम थियो।
के भन्छ ब्लेनम प्यालेस ?
चोरहरूले कम्तीमा दुई वटा गाडी प्रयोग गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशङ्का छ। ब्लेनम प्यालेसका प्रमुख कार्यकारी डोमिनिक हेअरले उक्त घटनाबाट आफूहरू दु:खी भएको बताएका छन्।
'यो मूर्खतापूर्ण र अर्थहीन कार्यबाट हाम्रा प्रिय मित्र मौरिचियो कट्टेलानको अद्भुत कला अमर हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,' उनले भने। सन् २०१७ मा उक्त ट्‌वाइलेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो। पक्राउ परेका व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा छन्। -बिबिसी